Mitadiava saron-tava dimy namboarina tsara ho an'ny hoditra | Bezzia
Susana Garcia | 01/05/2021 20:00 | beauty, Vokatra hatsaran-tarehy
Raha miresaka momba ny saron-tava voajanahary sy namboarina hikarakarana ny volo isika dia anjaran'ny sarontava no manatsara ny hoditry ny tarehy na vatana amin'ity lohataona ity. IRETO saron-tava azo ampiharina amin'ny toerana rehetra tadiavintsika tena mahay mikarakara hoditra izy ireo. Andao hojerentsika ny fomba hamoronana ny sasany manintona indrindra hanana hoditra lavorary izay azontsika anaovana akanjo lohataona.
ny ny sarontava vita an-trano dia azo atao amin'ny karazan-tsakafo rehetras. Afaka mamelona ny hoditra amin'ny fomba maro isika, amin'ny fampiasana izay omen'ny natiora antsika hanatsarana ny vatantsika. Ireo karazana sarontava ireo dia mora atao ary tena azo ampiharina satria amboarina ao an-trano misy zavatra vitsivitsy izy ireo ary manatsara be ny tarehy amin'ny fananana voajanahary.
1 Saron-tava hamelombelona ny hoditra amin'ny oatmeal
2 Sarontava ho an'ny hoditra mora tohina miaraka amin'ny aloe vera
3 Saron-tava astringent misy voasarimakirana
4 Saron-tava ho an'ny hoditra maina misy menaka oliva
5 Saron-tava fangaro amin'ny siramamy
Saron-tava hamelombelona ny hoditra amin'ny oatmeal
Oatmeal dia singa iray manompo zavatra maro. Tsy sakafo mahavelona be ihany no manompoa antsika amin'ny fomba fahandro marobe, fa manome koa zavatra lehibe amin'ny hoditra. ny oatmeal dia manana herim-pamoahana famoahana hoditra satria sady mikarakara azy no manampy azy hihazona ny hamandoana ao. Azonao atao ny mampiasa tantely kely hampifangaro azy ary hahazoana ny vokany tsara indrindra. Ny tantely dia manana fahaizana mandrehitra ny hoditra ary miady amin'ny olana toy ny mony ihany koa. Izy ireo dia singa roa mora ampiasaina izay mora hita. Apetaho amin'ny fanorana maivana amin'ny hoditra izany ary avelao mandritra ny roapolo minitra hanesorana azy avy eo.
Sarontava ho an'ny hoditra mora tohina miaraka amin'ny aloe vera
Ny aloe vera dia iray amin'ireo fangaro voajanahary izay hampiasainao indrindra raha te hikarakara ny hoditrao ianao na inona izany na inona. Tena soso-kevitra indrindra ho an'ny hoditra mora tohina indrindra satria manampy hydrate, tazomy ho madio sy hadio hatrany ny hoditra, amin'ny singa iray daholo. Mampitony ny hoditra amin'ny mena izy io ary azonao atao aza ny mampiasa azy aorian'ny masoandro hikarakarana ny hoditrao aorian'ny fiposahan'ny masoandro. Ny aloe vera voajanahary indrindra dia azo avy amin'ilay zavamaniry, manapaka ny ravina ary manala ny gel ananan'izy ireo ao anatiny, fa azontsika atao kosa ny mividy azy io mora amin'ny fivarotana raokandro hampiasaina amin'ny hoditra. Saron-tava izy io izay mampitony ny hoditra mena ary mampody azy io.
Saron-tava astringent misy voasarimakirana
Hoditra menaka no hanana ny olan'ny sebum be loatra izay miteraka fahalotoana maro hafa. Ny iray amin'ireo dingana voalohany tsy maintsy ataontsika dia ny manandrana mifehy ny sebum izay noforonina tamin'ny hoditra. Izany no antony lafatra ny saron-dranom-boasarimakirana. Azo afangaro tamina tantely na fotsy atody kely izy io, satria manalefaka izy ireo nefa tsy manampy menaka ny hoditra. Mety misy fiatraikany amin'ny hoditra ny voasarimakirana raha toa ka tratry ny masoandro isika any aoriana any, ka tsara kokoa raha alina no ampiasantsika an'io maska ​​io.
Saron-tava ho an'ny hoditra maina misy menaka oliva
Ny menaka oliva dia mahazatra ao an-dakozianay ary izy io koa dia singa mahavelona be azo ampiasaina amin'ny sarontava tarehy. Tena mando izy io ary tsy tokony hampiasaina amin'ny hoditra menaka, fa mety ho an'ny maina kokoa. Raha maina ny hoditrao dia afaka mampiasa menaka oliva sy sotrokely fotsy ianao mba afangaro. Hahazo hoditra miloko kokoa sy mamiratra kokoa amin'ny alàlan'ity maska ​​ity ianao.
Saron-tava fangaro amin'ny siramamy
Sugar, ho fanampin'ny ampiasaina amin'ny tsindrin-tsakafo, koba tsara io. Raha afangaro kely amin'ny menaka oliva iray sotro ianao dia hanana exfoliator tsara ho an'ny hoditrao. Amin'ny molotra na amin'ny tarehy ihany no azonao ampiasaina azy. Manotra ary diovy tsy tapaka ny tavanao avy eo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Sarontava vita an-trano 5 hanehoana ny hoditrao amin'ny lohataona
Ny fiomanana ara-batana azo antoka hilalaovana tenisy